ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရမှုမှာ ဥပဒေနှင့် ညီမညီ သူရဦးရွှေမန်း မေးခွန်းထုတ်
သူရဦးရွှေမန်းအပါအဝင် ပါတီဝင် ၁၇ ဦးကို ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီက ထုတ်ပယ်တဲ့လိုက်တဲ့ ကိစ္စအပေါ် ဥပဒေနှင့် ညီမညီ သုံးသပ်ပေးကြပါလို့ သူရဦးရွှေမန်းက ပန်ကြားလိုက်ပါတယ်
အမေရိကန်သံရုံး၏ ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုတွင် “ရိုဟင်ဂျာ” ဟု သုံးနှုန်းထားမှုနှင့် ပတ်သတ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ရှိ အမေရိကန်သံရုံးရှေ့တွင် ကန့်ကွက် ဆန္ဒပြရန် လျှောက်ထား
ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခံရသည့်အတွက် ဝမ်းသာသည်ဟု ဦးတင်မောင်ဦး ပြောကြား
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် နီးကပ်သည့် ဆက်ဆံရေးရှိနေသော သူရဦးရွှေမန်းအပါအဝင် ပါတီဝင်များအား ပါတီမှ ထုတ်ပေါ်တော့မည်ဟူသည့် သတင်းများမှာ ပြီးခဲ့သည့် လများကတည်းက ပေါ်ထွက်နေခဲ့သည်။
သမ္မတဟောင်း ဦးသိန်းစိန် ပြည်ခိုင်ဖြိုးတွင် စတင်ရုံးတက်၊ ပါတီဝင်အချို့ ထုတ်ပယ်ခံရဟု သတင်းထွက်ပေါ်
ဦးသိန်းစိန် စတင်ရုံးတက်သည့်နေ့တွင် ပါတီတွင်း အစည်းအဝေးတချို့ပြုလုပ်ခဲ့
Vani Sathisan နှင့် Adam Moser ရေးသားသည်။
မိတ္ထီလာအား ပြန်လည် ကုစားခြင်း
Frontier က သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ ရာထူးသက်တမ်းအတွင်း သော့ချက်ကျသည့် အဖြစ်အပျက်များကို လေ့လာကြည့်သည်။ အေးဆေးကာ ထင်ပေါ်လိုစိတ်နည်းသော ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း တစ်ဦးဖြစ်သည့် ဦးသိန်းစိန်၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများက အသွင်ကူးပြောင်းရေး ဆောင်ရွက်နေသော မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အုတ်မြစ်ချပေးခဲ့သည်။ မတ်လ ၃၀ က ဦးသိန်းစိန်၏ သမ္မတသက်တမ်းကာလ ကုန်ဆုံးသွားခဲ့သည်။ အပြစ်အနာအဆာများရှိသော ၂၀၁၀.
ဂလဲ့စားချေဖို့အတွက် ညစ်ညမ်း ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ဖြန့်ချိလိုက်တဲ့အခါ
လက်တုန့်ပြန်သည့်သဘောဖြင့် ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုများအား ဖြန့်ချိလိုက်မှုကဲ့သို့ တကိုယ်ရေ လုံခြုံရေး ချိုးဖောက်မှုများမှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် မြင့်တက်လာလျက်ရှိသော်လည်း တရားဥပဒေကြောင်းအရ ဖြေရှင်းရန် ကြိုးပမ်းမှုများမှာ ခံရသူများအတွက် တုန်လှုပ်ဖွယ်ရာ အတွေ့အကြုံတစ်ရပ် ဖြစ်သည် Jaiden Coonan ရေးသားသည်။ လက်တုံ့ပြန်သောသဘောဖြင့် ညစ်ညမ်းဓာတ်ပုံနှင့် ဗွီဒီယိုများဖြန့်ဝေခြင်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံကဲ့သို့ လိင်ကိစ္စတွင် ရှေးရိုးစွဲဆန်သည့် ယဉ်ကျေးမှုရှိသော.
Jaiden Coonan ရေးသားသည်။